हाम्रै घर तथा बारी वरिपरि पाईने अमृत झार सिस्नुले च्वाट्टै निको पार्छ यि रोगहरु ! पढेर सेयर गर्नुहाेला । सिस्नोमा के-के फाईदा हुन्छन् त जान्नुहाेस्, यस्ता छन् फाईदाहरु:-
रायोको सागमा ३ सय ५० आई.यू.भिटामिन मात्रै पाइन्छ भने सिस्नोमा १२ सय आई. यू. भिटामिन ए, र भिटामिन सी अत्यधिक रुपमा पाइन्छ । त्यस्तै आइरन, फमिक ए-सिड लगायतका अन्य तत्वहरु पनि यसमा पाइन्छन् ।
भिटामिन पाइने अन्य तत्वहरु भन्दा सिस्नोमा सबभन्दा बढी भिटामिन पाईन्छ । सिस्नोको नियमित प्रयोग बाट किड्नीको समस्या, पि-साब पोल्ने, दम, बाथ रोग, डाइटब्यालेन्सलगायत रगत उत्पादन गर्ने, रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउने काम गर्छ ।
यसका साथै सिस्नोको मेहन्दी बनाएर कपालमा लगाउँदा कपाल झ-र्नबाट रोक्छ भने कपालको चाँया पनि हटाउँछ । म-हिनावारी अनियमीत हुने ग्यास्ट्रिक, स्त्री-रोग, बाथ, खाना
नरुच्ने, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सुगर, जण्डिस, प्यारालाइसिस, पथरी, ग्याष्टिक, बाथ, अल्सर, कब्जियत, पायल्स, मधुमेह, जुका, युरिक एसिड, मु`त्र`रोगी, रक्तअल्पता, न`पु`सं`कता, बा`झो`पन भएका बिरामीलाई उपयोगी मानिन्छ ।
त्यसैगरी पुरुषको शु- क्र- किट उत्पादन, भाँचिएको र म- र्केको हाडहरुलाई जो-डन, आँखालाई तेजिलो र अनुहारलाई चम्किलो, शरिरलाई फुर्तिलो, छरितो र आकर्षक बनाउन, ढाँ-ड दुख्ने, घुँडा र जो-र्नी दुखेको, झस्को पसेको, स-र्को पसि सो-ला हान्ने जस्ता रोग निको पार्न सिस्नोको पाउडर
प्रयोग हुने गरेको छ । यसलाई झोल बनाएर खाना सँगै प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ र उमालेर खान फनि सकिन्छ । यसमा हुने रौ जस्तो झुसमा हुने फर्मिक अम्लले पोल्ने र हिस्टामाइनले सुन्निने भएकोले पीडादायक हुन्छ तर पानीमा उमालेपछि ती तत्वहरू नास भएर जान्छन् ।
यसको सोहि दु-र्गु-णको कारण पहिले पहिले यातना दिन तथा स-जाय दिन यसको प्रयोग गरिन्थ्यो । यसमा हुने भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन डी लौ-हतत्व, पोटासियम, म्यागानिज, क्याल्सियम जस्ता पौष्टिक पदार्थको कारण उत्तरी तथा पूर्वी युरोपमा यसको झोल लामो समयदेखि प्रचलित रहेको छ ।
सिस्नोको प्रयोग गर्ने विधि १० ग्राम सिस्नोको धुलोलाई २ सय मिलिलिटर तातो पानीमा मिसाएर रातभरि भिजाएर छोडिदिने र बिहान खाली पेटमा खाने । यसरी नियमित रुपमा प्रयोग गर्दा छोटो समयमै यसबाट फाईदा लिन सकिन्छ । मानिस स्वस्थ रहनका लागि पनि भित्री पेटको सफाई अनिवार्य हुन्छ यसको लागि सिस्नो भन्दा उत्तम विकल्प अरु केही हुन सक्दैन ।
शरिरका भित्री अंगहरुको सफाइ गर्ने उपाय सजिलो छ । तर हामी कतिले थाहा पाएर पनि त्यो उपाय प्रयोग गरेका छैनौं ।
शरिरका बाहिरी अंगको सफाइका लागि पानी, श्याम्पु र साबुनले नुहाए जस्तै भित्री अंगको सफाइका लागि सिस्नु खानु पर्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्न् ।
हामीले हप्तामा एक पटक पानीले नुहाए जस्तै गरी नियमित रुपमा हप्तामा एकपटक सिस्नु खाने गर-याैँ भने शरिरका भित्री अंग पनि सफा हुने नेपालका कृषि बैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् । हप्ताको एकपटक सिस्नु खानाले पेटमा रहेका सबै बि-कार दि- सा-को माध्यमबाट बाहिर जाने तथा दि- सा-को थै-लो सफा हुने कृषि बिज्ञहरु बताउछन् ।
हप्तामा एकपटक सिस्नु खाने मान्छेसँग जुनसुकै प्रकारका रोगहरुसँग लड्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ । सामान्यतया यस्ता मान्छेलाई कुनै पनि रोगले छुँदैन । बहुगुण भएको यो सिस्नो हाम्रो पहाडी क्षेत्रका गाँउ घरका वारीका कान्लामा पाईने हुँदा घरमा यसलाई सागको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । हामीले खाने सागहरु मध्ये सिस्नु पनि एक उत्कृष्ट सागमा पर्छ । -इन्फो नेपाल
२०७८ बैशाख ३०, बिहीबार १८:२९ गते 1 Minute 653 Views